Allegrini Palazzo Della Torre 2016 - Wevino.store
Khamriga waxaa loo sameeyaa iyadoo la adeegsanayo tabo cusub oo loo yaqaan 'ripasso'. Canab badankood waxaa lagu gooyay xilligii goosashada, inta soo hartayna waxaa loo qoondeeyay inay qayb ahaan qalalaan. Bishii Janaayo, khamrigii lagu qasay casiir ka yimid canabkii la shiiday ayaa mari doona halsano labaad.
Beerta canabka ah waxaa ku wareegsan Villa della Torre, oo ah farshaxan aad u qurux badan oo ah naqshadda Renaissance ee hadda leh qoysku, wuxuuna soo saaraa khamri gaduudan oo buuxa oo leh awood duug ah ugu yaraan toban sano. Isku-darka ayaa ah isku dhafka taariikhiga ah ee Corvina iyo Rondinella oo ay ku jiraan tiro yar oo Sangiovese.
Khamrigaani waa casaan ruxan oo qoto dheer oo fudud oo ay weheliyaan suxuun kala duwan oo Talyaani ah, oo ka sarreeya dhammaan risottos, gaar ahaan kuwa dhadhan leh Saffron, boqoshaada digirta iyo hilibka doofaarka; suxuunta caadiga ah sida baastada oo ay ku jiraan suugada Amatriciana iyo Kaarboonaraar, lasagna la dubay, gnocchi oo leh gorgonzola farmaajo iyo iniinno; Hilib la dubay iyo rooti.